Dibadbax Lagu Taageeriyo Qaadista Isbaarooyinka Oo Ka Socda Magaalada Muqdisho | Codka Bulshada Media Network	Saturday, May 25th, 2013	Home
Dibadbax Lagu Taageeriyo Qaadista Isbaarooyinka Oo Ka Socda Magaalada Muqdisho
Codkabulshada Media Network (Muqdisho)Dibadbax balaaran oo ay soo qaban qaabiyeen qeybaha bulshada ku nool magaalada Muqdisho lagulan tageerayo go’aankii dhawan madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu ka qaatay isbaarooyinkii yaalay magaalada ayaa ka dhacay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Gaar ahaan isku soo baxan ayaa ka dhacay degmada C/siis garoonka Ex-luujino , halkaasoo ay isugu tageen dadweyne ka kala yimid xaafaddaha ay ka kooban tahay caasimada.
Dadka isku soo baxa ka qeyb-qaadanaya ayaa sitay boorar ay ku qoran yihiin hal ku dhagyo ay ku taageersan yihiin bur burinta jidgooyooyinkii yaala magaalada Muqdisho oo maalmihii ugu danbeeyay ay ku howlanaayeen ciidamada nabad-galyada.
Goobta uu dibadbaxu ka dhacayo ayaa amaanka siweyn loo adkeeyay waxaana nabad-galyada sugayay ciidamo isugu jira baliis iyo nabad-sugida dowladda Soomaaliya.
Waxaa lagu wadaa n xubno ka mid ah maamulka gobolka Banaadir iyo xukuumadda ay hadalo u jeediyaan dadka mudaaharaadka ka soo qeybgalay.
Dibadbaxan maanta ka dhacaya magaalada Muqdisho ayaa qeyb ka ah dibadbaxyo labadii cisho ee la soo dhaafay ka socday qeybo ka mid ah caasimada Muqdisho, inkastoo kan maanta uu ka dad badnaa kuwii ka horeeyay.